Inqubo yezikhalazo zeHhovisi | Law & More B.V.
Law & More uyakwazisa ukwaneliseka kwamakhasimende ethu. Inkampani yethu izosebenzisa imizamo engcono kakhulu yokuba sezinsizakalweni zakho. Noma kunjalo kungenzeka ukuthi awenelisekile ngesici esithile sezinsizakalo zethu. Uzothola ngezansi kwesenzo ongasithatha ezimweni ezinjalo.
Uma kwenzeka ungagculisekile ngokwakhiwa kwesivumelwano sokusebenza, ikhwalithi yezinsizakalo zethu noma inani le-invoice yethu, uyacelwa ukuthi ulethe ukuphikisana kwakho kuqala nommeli wakho. Ungaxhumana noMnu TGLM Meevis wesikhungo sethu. Inkampani yethu izosiphatha lesi sikhalazo ngokuya ngenqubo echazwe kwinqubo yethu yezikhalazo ehhovisi.
Sizoxhumana ngokuthintana nawe ukuthola isisombululo senkinga ephakanyisiwe ngokushesha okukhulu. Sizohlala siqinisekisa ikhambi elinjalo ngokubhala. Ungalindela ukuthola ukusabela kwethu kwisikhalazo sakho ngokubhala kungakapheli amasonto ama-4. Esimweni lapho kufanele siphambuke khona kuleli gama, sizokwazisa ngesikhathi futhi sizosho isizathu sokuphambuka kanye negama ongalindela ukusabela kulo.
Isigaba 1 Izincazelo
Kule nqubo yezikhalazo imigomo ebekwe ngezansi izoba nezincazelo ezilandelayo:
isikhalazo: noma iyiphi inkulumo ebhalwe phansi yokungoneliseki okwenziwe yi-kasimende noma egameni lomthengi noma lowo muntu osebenza ngaphansi kwesibopho sakhe maqondana nokuphetha noma ukwenziwa kwenhlangano yamakhasimende ngezinsizakalo zobungcweti (overeenkomst van opdracht), ikhwalithi yezinsizakalo ezinikeziwe noma inani elifakwe kumasethingi anjalo, ngaphandle, noma kunjalo, isikhalazo ngaphakathi kwencazelo yesigaba 4 soMthetho waseNetherlands kwi-Attorney Profession (I-Advocatenwet);
okhalazayo: iklayenti noma ummeleli wakhe, afaka isikhalazo;
Isikhulu sezikhalazo: Ummeli obhekene necala lokusingatha isikhalazo, okokuqala uMnu TGLM Meevis.
Isigaba 2 Ububanzi besicelo
2.1 Le nqubo yezikhalazo isebenza kukho konke ukubandakanyeka kwezinsizakalo zomsebenzi ezihlinzekwa ngu Law & More B.V. kumakhasimende ayo.
2.2 Kungumsebenzi wawo wonke ummeli ka Law & More B.V. ukuphatha zonke izikhalazo ngokuhambisana nale nqubo yezikhalazo.
Isigaba 3 Izinjongo
Inhloso yale nqubo yezikhalazo yile:
ukubeka inqubo lapho izikhalazo zeklayenti zingaxazululwa ngendlela eqondiswe kwisisombululo futhi kungakapheli isikhathi esifanele;
ukubeka phansi inqubo yokuthola imbangela (s) yezikhalazo zeklayenti;
ukugcina kanye nokwenza ngcono ubudlelwano obukhona bamakhasimende ngokusingatha izikhalazo ngendlela efanele;
ukukhuthaza impendulo kunoma yisiphi isikhalazo ngendlela egxile kwekhasimende;
ukwenza ngcono ikhwalithi yamasevisi ngokuxazulula nokuhlaziya izikhalazo.
Isigaba 4 Ulwazi ngokuqala kwemisebenzi
4.1 Le nqubo yezikhalazo yenziwe yaziswa emphakathini. Kunoma iyiphi incwadi yokuzibandakanya neklayenti, iklayenti lizokwaziswa ukuthi kunenqubo yezikhalazo ekhona, nokuthi le nqubo izosebenza ezinsizakalweni ezinikeziwe.
4.2 Imigomo ejwayelekile yokubandakanya (imigomo nemibandela) ezisebenza kunoma yikuphi ukubandakanyeka kwamakhasimende (futhi ngokubhala noma iyiphi incwadi yokubandakanya iklayenti) kuzokhomba iqembu elizimele noma isidumbu esingathumela kuye isikhalazo esingakaxazululwa ngokuhambisana nale nqubo yezikhalazo ukuze sithole isinqumo esibophayo.
4.3 Izikhalazo ngokwencazelo yendatshana 1 yale nqubo yezikhalazo ezingazange zixazululwe ngemuva kokuba sezisingathwe ngokulandela le nqubo yezikhalazo zingalethwa kwi-Dispute Committee Advocacy (I-Geschillencommissie Advocatuur).
Isigaba 5 Inqubo yangaphakathi yezikhalazo
5.1 Uma iklayenti liza ehhovisi ngesikhalazo maqondana nemiyalo enikezwe yona Law & More B.V.., isikhalazo sizodluliselwa kumphathi wezikhalazo.
5.2 Isiphathimandla sezikhalazo sizokwazisa umuntu okwenziwe ngaye isikhalazo mayelana nokufakwa kwesikhalazo futhi sizonikeza ummangali kanye nalowo okufakwe ngaye isikhalazo ithuba lokuchaza isikhalazo.
5.3 Umuntu okufakwe ngaye isikhalazo uzozama ukuxazulula lolu daba kanye neklayenti elifanele, noma ngabe kuncike ekungeneleleni kwesikhulu sezikhalazo.
5.4 Isikhulu sezikhalazo sizoxazulula isikhalazo kungakapheli amasonto amane ngemuva kokuthola isikhalazo, noma sizokwazisa ummangali, sisho izizathu zokuphambuka kwalesi sikhathi, sikhombise isikhathi okuzonikezwa ngaso umbono wesikhalazo.
5.5 Isikhulu sezikhalazo sizokwazisa ummangali kanye nomuntu okwenziwe ngaye isikhalazo ngokubhala mayelana nombono ngokufaneleka kwesikhalazo, noma ngabe kukhona izincomo noma cha.
5.6 Uma isikhalazo sasingathwa ngendlela egculisayo, ummangali, isikhulu sezikhalazo kanye nomuntu okufakwe ngaye isikhalazo bazosayina umbono ngokufaneleka kwesikhalazo.
Isigaba 6 Isigaba XNUMX Imfihlo nokusingathwa kwezikhalazo mahhala
6.1 Isikhulu sezikhalazo kanye nalowo okufakwe kuye isikhalazo bazobheka imfihlo maqondana nokuphathwa kwesikhalazo.
6.2 Ummangali akayikweleta noma yisiphi isinxephezelo maqondana nezindleko zokuphathwa kwesikhalazo.
Isigaba 7 Izibopho
7.1 Isikhulu sezikhalazo yiso esizobhekana nokuphathwa kwesikhalazo ngesikhathi esifanele.
7.2 Umuntu okufakwe ngaye isikhalazo uzokwazisa isikhulu sezikhalazo nganoma yikuphi ukuxhumana nommangali kanye nanoma yisiphi isisombululo esisebenzayo.
7.3 Isikhulu sezikhalazo sizokwazisa ummangali mayelana nokuphathwa kwesikhalazo.
7.4 Isikhulu sezikhalazo sizoqinisekisa ukuthi ifayili lesikhalazo liyagcinwa.
Isigaba 8 Isigaba XNUMX Ukubhaliswa kwezikhalazo
8.1 Isikhulu sezikhalazo sizobhalisa isikhalazo, sikhombe isihloko sesikhalazo.
8.2 Isikhalazo singahlukaniswa ngezihloko ezihlukene.
8.3 Isikhulu sezikhalazo njalo ngezikhathi ezithile sizobika ngokusingathwa kwanoma yiziphi izikhalazo futhi senze izincomo ukuvimbela ukuvela kwezikhalazo ezintsha kanye nokwenza ngcono izinqubo.
8.4 Noma yimuphi umbiko nezincomo kuzoxoxwa ngazo bese kuthunyelwa izinqumo okungenani kanye ngonyaka.